CAJIIB: Taageere Real Madrid Ah Oo Soo Bandhigay Fashilkii Ugu Waynaa Ee Kooxdiisa Xili Ciyaareedkan Ee Uu Marceloo Sababta U Noqday Iyo Marcelo Oo Jawaab Ka Soo Bixiyay. - GOOL24.NET
CAJIIB: Taageere Real Madrid Ah Oo Soo Bandhigay Fashilkii Ugu Waynaa Ee Kooxdiisa Xili Ciyaareedkan Ee Uu Marceloo Sababta U Noqday Iyo Marcelo Oo Jawaab Ka Soo Bixiyay.
Real Madrid ayaa shalay guuldaro lama filaan ah Santiago Bernabeu kagala kulantay kooxda yar ee FC Girona inkasta oo ay Madrid gool uu Casemiro dhaliyay ku hormartay laakiin waxaa Los Blancos ka yaabsaday Cristhian Stuani iyo Portu oo Girona dhinaca kale ugu rogay natiijadii kulankii Madrid.
Marcelo ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii Real Madrid ee eedaynta badan kala kulmay jamaahiirta Los Blancos kadib markii uu sii watay qaab ciyaareedkii liitay ee uu xili ciyareedkan ku soo jiray. Xogta loo diwaan galiyay Marcelo ee kulamadii uu shaxda Madrid ku soo bilawday xili ciyaareedkan ayaa ah mid naxdin leh oo musiibo wayn ku soo noqotay Los Blancos.
Santiago Solari ayaa kulankii FC Girona shaxdiisa dib ugu soo celiyay Marcelo kadib markii uu waqti dheer kaydka ugu hayay bandhigii liitay ee uu ka soo sameeyay kulamadii uu hore u soo ciyaaray, laakiin Marcelo ayaa jamaahiirta kooxdiisa Madrid ee eedaynta u soo jeedinayay u si toos ah ugu soo jawaabay.
Kadib markii uu Marcelo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u liitay ayay Solari ku qasabtay in uu fursad siiyay da’yarka Sergio Reguilon kaas oo si layaableh uga faa’iidaystay fursadan isla markaana biyo kulul ku dhex riday Marcelo wuxuuna hadda Sergio Reguilon noqon doonaa difaaca bidix ee uu Solari sida buuxda ugu tiirsanaan doono.
Taageere Real Madrid ah ayaa soo qoray xogta kooxdiisa Madrid ee dhamaan kulamadii uu La liga ee uu Marcelo xili ciyaareedkan ku bilawday kuwaas oo ay Madrid hal kulan oo kaliya ka soo guulaysatay waana arinta uu Marcelo jawaabta ka soo bixiyay.
Markii uu xidiga reer Brazil arkay xaqiiqda ay ku salaysan tahay eedaynta uu kala kulmay jamaajiirta kooxdiisa ayuu go’aan ku gaadhay in uu jawaab ugu soo qoro bartiisa Instagram wuxuuna qirtay in ay qaladkiisa tahay dhamaan natiijo xumadii xili ciyaareedkan Madrid ku soo gaadhay horyaalka La Liga.
In sagaal kulan oo uu Marcelo ku soo bilawday shaxda kooxdiisa Real Madrid ee kulamadii La Liga ay hal kulan oo kaliya soo guulaysatay waxay si cad u muujinaysaa in wax wayni iska badaleen xaaladiisii fiicnayd isla markaana uu ku sugan yahay qaab ciyaareedkiisii abid ee Madrid ugu liitay.
Marelo ayaa jawaab kooban balse qirahso buuxdaa ku dheehan tahay waxa uu taageeraha xogta guuldarooyinkii Madrid soo qoray uu ugu soo jawaabay: “Dhamaan waa qaladkayga, aan ka socono!”.
Halkan hoose kaga bogo xogta layaabka leh ee Marcelo ku qasabtay in uu taageeraha kooxdiisa Real Madrid jawaabtan u soo bixiyay ee isbarbar dhiga natiijooyinkii kulamadii uu shaxda Madrid ku soo bilawday iyo kuwii uu ka maqnaa.
Marcelo ayaa hadda u baahan in uu meel fog ka soo dagaalamo kadib guuldaradii FC Girona wuxuuna si lumin doonaa booskiisii uu markii horeba arkayay iyada oo Sergio Reguilon uu kala wareegay waxaana hadda cadaatay in Marcelo aanu ahayn xidigii uu hore u soo ahaa.